Simba reInternet Kuchengetedza Zvirongwa zveBhizinesi Rako Maererano na Semalt
Kana iwe uchifanira kushandisa dhizinesi rebhizimisi rako, tsvakurudzo kana basa, hapana chakaipa kudarika kumirira mapeji kutakurwa muNetscape Navigator kana Internet Explorer. Paunenge uchitsvaga paIndaneti, unogona kutarisana nechinetso chekugadzirisa zvishoma uye unogona kurasikirwa nehurukuro yaunoda. Kana uri kutarisa webhusaiti yakaremara kana bhulogi nezviuru zvemaji, iwe unofanirwa kuvhara mouse yako nguva dzakawanda kuti uwane maji iwayo akazarurwa zvakanaka - large grain silos for sale. Zvinofadza kuti, mapurogiramu epadheta ewebhu anoita kuti zvive nyore kwauri kutakura nzvimbo dzako dzinofarira pasina dambudziko. A web extractor inonyanya chirongwa chinobatsira vanotsvakurudza, vatapi venhau, vadzidzi, mabhizinesi, uye vatengesi vanobudisa dhese nyore nyore uye vanoona mapeji ewebhu akasiyana nepamhanho. Zvimwe zvezvombo zvinotendeseka zvakatsanangurwa apa.
1. Kufambira mberi:
Kufambira mberi kune imwe yenzvimbo dzakanakisisa uye dzinonyanya kuzivikanwa dzewebhu paIndaneti. Nechirongwa ichi, unogona kusarudza kuti zvinhu zvipi zvaunoda kutora, uye hapana muganhu pane nhamba yemapeji ekubviswa. Uyewo, haudi FTP pane webhusaiti yako kuti utore data. Ichi chishandiso chinowirirana neWindows, Vista, XP nedzimwe nzira dzakadaro dzekushanda.
Ndiyo imwe yemapurogiramu ekubudisa webhu. Nhare yeEXtractor yakanaka kune vose vadzidzisi uye vasiri mapurogiramu uye inoita tsvakurudzo yako yepaIndaneti nyore uye yakakurumidza. Iwe unogona kutora iyo webhusaiti yose kana zvikamu zvayo uchishandisa chimbo chine simba..Inonyatsozivikanwa nehutachiona-yehutachiona hwehutano uye jira rekutarisa rinokubatsira kugadzirisa uye kuronga chero dhizha chero ripi zvaro nenzira iri nani. Yepanete eXtractor inobvumirana nevose maWindows maBhaibheri uye madivaysi eIfree.
Sitesucker inonyanya maitiro mac anobatsira webhusaiti yepamusoro uye anounza shanduko ye internet yako. Inogona kukonzera nyore mapeji aidiwa, mapikicha, mapepa emashizha uye mapepa e-hard drive yako yekushandiswa kwepaIndaneti. Iwe unongoda kuisa URL mu SiteSucker interface, uye iyo ichinyatsotora data yakada. Iyi purogiramu inoda Mac OS X 10.11 uye inogona kubudiswa kubva paWeb site yeSucker.
Kubata-Site-imwe yenzvimbo yakasimba uye yakazara webhupu yekutsvaira s. Inoshanda zvose zviri paIndaneti uye paIndaneti uye inogona kuumba makopi ewebsite kanowanikwa kakawanda, pamwe chete nemafaira ayo anotsigira akafanana nemifananidzo, mapeji, mafaira ezwi, uye mavhidhiyo. Ichi chigoni chinogona kubata mafaira kubva kune zvakasiyana-siyana panguva imwechete, kuchengetedza nguva yakawanda nesimba. Iyo inowirirana ne ASP yako, PHP, Cold Fusion uye JR mumitauro uye inogona kuvashandura kuva HTML yakasimba. Iyi purogiramu yepachena inoshanda paWindows 7, Vista, XP, Windows Me, uye Win98.
Shanduro yeBlue Squirrel yakadanwa inonzi WebWhacker 5. Inogona kukopa nzvimbo yose ku disk yako yevashandisi vepaIndaneti uye inoshanda sekudzidzisa site for tutors and students. Zviri nyore kugadzirisa uye nguva dzose inotarisa deta yako yehutano, inoronga uye inoigadzirisa maererano nezvinodiwa zvako. Uyezve, WebWhacker inogona kudzokorora zvinyorwa zvewebsite yako uye inoenderana neVista, XP uye Windows 7.